IDOORO AAN KUDAAYE HADDII KALE WAA KAA DULYAARMEYSA
Waa fariin deg deg oo aan doonayo in umada Somaliyeed ee kushirsan Nairobi- gaar ahaan kuwa diyaarka u ah inaay codeeyaan- aan ladoonayo inaan akhristan oo ay bal fiiriyaan inaay soconkarto iyo inkale!
Siloo bad-baadiyo umada iyo shirkan soo socday labada sano iyo ‘Shii’, waa inaan doorana kan Somalida ugu mujrimsan sidaasna waxaan uleeyahey arimahan soo socdo awgood:
Waa marka koobaade, shirka Nairobi iyo kii kahoreeyey shicaarkiisa qarsoon wuxuu ahaa “IDOORO AAN DAGAALKA JOOJIYA”, Somalida meesha tagtana waxay uhaystan meel looga takhaluso qab-qablayaasha!
Waa tanlabaade, shirka waxa loo qabtey nimanka umada dhiigeeda cabey in dowlad loogu soo dhiso si’ay noo xukuman intii ay gooni gooni noo xasuuqilahaayeen!
Waa tan sedexaade, hubka waxay uqaateen in mar uun madaxweyne layirahdo walow saacad kahor inta aanu qabriga lageyn!
Waa tan sedexade, waxa kale oo aan ula jeeda hadalkii Somaliyeed ee ahaa “Kana siib, kana saar aan siduu yahey eegne” sow kulama habone maadama aan xabad isaga fujinweyney nimankan inaan xukum isaga fujino, waa tii naseegtey inaan Siyaad Barre usugno intaa uu kadhimanayo oo aan kadoor bidney inaan kaga tuurno qori caaradiis ilaa anagii nalakala tuurey!
Waa tan afaraade, haddii ay iminka shirka lagu dooran waayo oo soo kala yaacan oo ay xabada horey kabilaaban, yaa kaa celinayo ileyn shirkan gaalo ay futada kadadaan kama danbeyso, bal waxan ognahey gaalo diyaar u ah inaay hubka sii qaataan haddii aanu soo bixin kay rabaan!
Waa qodobka shanaade, haddii aan dooran kariwaayo Qaasim, Cadow ama Galayd iyo wixii lamid ah, waay iska tagayaan oo meelihii ay kayimadeen ayey ushaqo tagayaan! Laakinse Abdullaahi Yusuf, Yalaxow, Aaden Dheere, Aaden Madoobe iyo kawa lamidka ahi, xageey aadayaan? Jawaabta adiga ayaan kuu deeyey!!!
Sagaashamaadkii markii ay socotay heshiisiinta wadankii la oran jirey Liberia ayaa waxay wareysatey BBCda; qaybta Focus on Africa haweeney taageero u aheyd urur la’oranjirey UlIMU. Waxa laweydiyey cida ay sowdkeeda siisey doorasho ay markaas UN waday, waxay kujawaabtey arin aan isleeyahey waa inay Somalida dhaafin maanta: “Waxan codka siiyey Charles Taylor inkasta oo aan taageero u ahey xisbiga layirahdo UliMU”, waxa laweydiyey sababta ay codkeeda usiisey charles, waxay kujawaabtey “Si’aanu dagaalka usii wadin!
Uga danbeyntii, Somalida waxa lagu yaqaan qofkii maqaal qoraba in lagu tuhmo qabiil iyo in hadalkii lasii raaco, anigu dadka Somalia dumiyey ee aan maanta urabo inaay naxukumaan waxba lama wadaago laakinse maslaxada Somaliyeed ayaan kafikirayaa. Haddii aan kuu sheego fikradan goorta ay igu soo dhacdey waad rumaysan laheyd, Salaada Subax goor aan wardinayo oo aan Allah baryayo!!!